Iingcamango zokuhlobisa ikhaya lakho ngepiyano enkulu | IBezzia
Iingcamango zokuhlobisa ikhaya lakho ngepiyano enkulu
UMaria vazquez | 11/10/2021 20:00 | Ifenitshala
Udlala ipiyano? Ngaba kukho umntu ekhaya ofunda ukudlala esi sixhobo? Ukuba kunjalo, unokuba unayo ipiyano eludongeni Ekhaya. Zezona zidume kakhulu kwaye kukho izizathu ezibini eziqinisekileyo zoku: zithatha indawo encinci kwaye zitshiphu kunepiyano enkulu.
Iipianos ezinkulu zinhle kakhulu kodwa bafuna ukuba nendawo ebalulekileyo yokuhlala ekhaya. Ukuba ayiyongxaki leyo kuwe, namhlanje sikunika imibono yokuhombisa ikhaya lakho ngepiyano enkulu kwaye uyenze ngobuninzi bayo, ngokuthetha ngokuhombisa.
2 Indawo efanelekileyo
2.1 Ecaleni kwefestile kwigumbi lokuhlala
2.2 Ecaleni kwezinyuko
2.3 Kwigumbi labucala
Iipianos ezimnyama ezimnyama zezona zidume kakhulu. Zizo ezo sinokuhlala sizifumana emakhaya kunye nezo zisebenza njengezixhobo kwiikonsathi nakwingoma. Zintle kakhulu, ayinakuphikwa. Nangona kunjalo, ayizizo kuphela iindlela ezizezinye; Unokubheja nakwiipianos ezimdaka nezimhlophe ukuhombisa ikhaya lakho.
Njengamaxesha onke xa sithetha ngombala, ukukhetha efanelekileyo kuya kudlala endaweni yethu xa kufikwa ekufezekiseni isitayile esithile kwigumbi lokuhlala. Iipiyano ezinkulu ezimnyama zingena nakweyiphi na imeko, nangona kunjalo, ukuba ufuna ukunika igumbi isitayile sangoku kodwa esihlaziyiweyo nesendalo, ipiyano emdaka inokuba ngumlingane wakho osenyongweni. Kwaye ithagethi? Umhlophe uphuphuma ubuntu kwaye ulingana ngokugqibeleleyo kwimeko zangoku kunye nezobugcisa.
Indawo yokuhlala Kuhlala kuyindawo eqhelekileyo ukubeka ipiyano enkulu, kuba lelona gumbi likhulu endlwini. Enye yezona ngxaki zixhaphakileyo ukuhombisa indlu ngepiyano enkulu ihlala ichanekile ngokungabikho kwesithuba, ke kunzima ukuba xa singafumani ndawo kwigumbi lokuhlala singayenza kwelinye igumbi. Kodwa ngaba kuphela kwendlela eyahlukileyo? Akunjalongo noko.
Ecaleni kwefestile kwigumbi lokuhlala
Ukuba umbono wakho kukubeka ipiyano enkulu kwigumbi lokuhlala, yifumanele indawo kufutshane nefestile. Ke, unokusebenzisa ukukhanya kwendalo xa ufuna ukudlala ipiyano. Beka ityali efudumeleyo phantsi kwepiyano, isibane sanamhlanje ngaphezulu kwayo, kunye nemifanekiso ethile eludongeni ukwenza indibano enomtsalane kunye nezobugcisa.
Uya kufuna kwakhona isitulo sokudlala ipiyano kunye nesihlalo esitofotofo okanye ipouf xa umntu efuna ukuhlala phantsi akuphulaphule. Ukuba kwesi sithuba okanye kufutshane naso unethuba lokubandakanya ishelufu yomsebenzi, ungabeka zonke iincwadi zakho kunye namanqaku kuso.
Kwizindlu ezinkulu nge izinyuko eziphakathi kunye nendawo enkulu ejikeleze ezi, ungathatha ithuba lokubeka ipiyano. Yenye indlela efanelekileyo yokugcwalisa indawo eqhelekileyo yeyaseholweni okanye kwigumbi lokuhlala kwaye akusoloko kulula ukuhombisa.
Izinyuko ezintle kunye neendonga ezicocekileyo yiyo yonke into oyifunayo ukwenza ukuba ipiyano yakho ibonakale intle. Enye yeembono zokuhombisa ikhaya lakho ngepiyano enkulu. ephucukileyo kwaye ekhethekileyo, kanjalo. Iya kuba yinto yokuqala ukubona iindwendwe zakho xa usamkela ekhaya.
Ngaba unayo igumbi elisezantsi kophahla okanye igumbi elingenanto Ekhaya? Oku kunokuba yindawo efanelekileyo yokugcina ipiyano enkulu kunye nokuzilolonga. Awudingi ukuba ube mkhulu kakhulu; Uya kudinga kuphela indawo yepiyano, izihlalo ezimbalwa kunye nokugcina iincwadi zakho kunye nomculo wephepha.
Ukuba unendawo yokuguqula kwigumbi lepiyano eyona nto ikulungeleyo ukuyikhusela kwisandi. Ke unokuziqhelanisa kangangoko ufuna ngaphandle "kokuphazamisa" amanye amalungu osapho okanye ngaphandle kokuphazanyiswa. Uyakwazi ukugxila kwipiyano. Nangona uzakufuna ngaphezulu kokungavunyelwa sisandi ukugxila. Kwaye kunzima ukugxila kwisithuba ukuba kuyabanda kwaye akwamkelekanga.
Beka ikhaphethi kwindawo, ezinye izitulo, unobhala omncinci -Ukuba ubhala owakho umculo- kwaye unakekele ukukhanya, ngakumbi ukuba awunako ukungena okukhulu kokukhanya kwendalo. Hlanganisa ukukhanya ngokubanzi kunye nezinye ezisondeleyo ezikuvumela ukuba ufezekise iimeko ezahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ifenitshala » Iingcamango zokuhlobisa ikhaya lakho ngepiyano enkulu